Otu esi akpo ahihia elu n'ulo: ihe kacha mma - Berry - 2020
Otu esi akpo nku na ulo iji chekwaa uru ya
Banyere ihe ngwọta nke anụ ọhịa ọhịa mara n'oge ochie. Na ọgwụ ọgwụ ha ji mee ihe ọ bụghị nanị na tomato, kamakwa mgbọrọgwụ, akwụkwọ, okooko osisi. Na nkà mmụta ọgwụ, a na-ewere osisi ndị ogwu a dị ka mkpụrụ osisi dị iche iche na-eme ka ahụ dị jụụ, antibacterial, diuretic, hemostatic na-achịkwa ọrụ nke tract gastrointestinal. Ka anyị kwuo banyere otu esi ehicha ahịhịa elu, ihe ndị dị mkpa iji nakọta ma mgbe ọ kachasị mma ime.
Olee mgbe na otu esi eburu eriri rose maka ihicha?
Nkwadebe tomato maka ihicha
Kedu ka esi esi kpoo nkpu na ulo?
Na batrị eletrik
Kedu ụzọ ndị ọzọ dị?
Kedu otu esi echekwa anụ ọhịa gbara ọkụ?
Ngwurugwu ndị bara uru ọ na-adabere n'ọnọdụ usoro ihicha?
Ichapu mkpụrụ nke ahịhịa ọhịa bụ ụzọ kachasị ochie nke canning tomato maka nchekwa oge. Na ụdị a, akpụkpọ ahụ na-ama jijiji, ihe na-emepụta ihe na-eme ka mmiri ghara ịdị na-arụ ọrụ, ma ha anaghị efunahụ ha.
Ọ dị mkpa ịhazi usoro nchịkọta nke ọma ka mmiri si na mkpụrụ nke osisi prickly ghara ikpochapụ, mana nwayọ na-enweghị ìhè anyanwụ kpọmkwem. Site n'ichebe nchekwa nke ihe gbasara ọgwụ, oge ngwụcha nke rosehip na ụdị mịrị amị dị ruo afọ 3. N'ebe akọrọ na nke ọma, tomato nwere ike ịdọrọ ogologo oge, ma kwa afọ ike ịgwọ ha na-ebelata.
Ndị ọkachamara na-agwọ ọrịa na-atụ aro ka ị gbakwunye mkpụrụ osisi ndị na-abụghị ihe karịrị otu afọ, na ihe niile, na-enweghị otu, ụgwọ ọgwụ.
Ị ma? Rosehip tomato, tụnyere akụkụ ndị ọzọ nke osisi ahụ, ruo n'ókè dị ukwuu na-agwakọta nri. Na ha mejupụtara hụrụ: vitamin A (2.6 mg), PP (0,6 mg), E (1.7 mg), C (650 mg), ígwè (11.5 mg), manganese (19 mg), ọla kọpa (37 mg), molybdenum (4.3 mg), zinc (1.1 mg), potassium (23 mg), calcium (28 mg), magnesium (8 mg), sodium (5 mg), phosphorus (8 mg ), pectins, sucrose, ascorbic pentosans na citric acids, riboflavin.
Ọnụ ọgụgụ nke vitamin ndị ahụ na-adabere na oge nchịkọta ya. Ruo ókè nke tomato chara acha na-agbanye na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie gloss na-adụ. Ụdị dị otú ahụ adịghịzi mma maka ihicha. Ọ ka mma ịkwụsị ma mkpụrụ osisi na-enweghị mkpụrụ. Iji ghọta ụdị rose ọhịa nwere ike ịnakọta, ga-enyere akpụkpọ anụ ahụ aka na-egbuke egbuke. Maka ịsacha, a na-atụ aro nnukwu ihe eji emepụta ihe na ihe atụ. Ọ bụrụ na a na-egbochi ọnụ ha n'akụkụ mgbidi nke beri ahụ, owuwe ihe ubi amalitela n'isi ụtụtụ - briar chọrọ oge iji mee ka ọ dịkwuo mma.
Na nkata kwesịrị itinye mkpụrụ osisi niile, na iko na stalks. N'ime oge, mgbe akpochara ha, ha ga-apụ n'anya ngwa ngwa. Ma nke a ga-enyere aka na nnukwu ọnya iji chekwaa vitamin C, nke a ga-ebelata n'oge usoro ihicha.
Ọ dị mkpa! A na-emegide Rosehip maka ndị mmadụ na-ata ahụhụ site na thrombosis, thrombophlebitis, endocarditis na ụda ọbara.
Mgbe ị na-aga ịnakọta rosehips, họrọ ebe a na-eme gburugburu ebe obibi, site n'okporo uzuzu uzuzu na ebe ndi oru mmeputa ulo oru. Maka ihe ndi ozo na-abanye n'ime ohia, n'ihi na osisi nile nwere ike itinye ihe ndi ozo na gburugburu ebe obibi. O yighị ka ọgwụ dị otú ahụ ga-aba uru.
Anụ ọhịa na-adịkarị na mba anyị, ma, ebe ọ bụ na ọ bụ ihe dị oke egwu maka ọnọdụ nke ịgha mkpụrụ, a na-ahụ ya n'ebe niile. Iji chịkọta, họrọ osisi na oke ọhịa, oke ugwu na oke ọhịa. Mee atụmatụ a na ihu igwema ọ bụghị, mmiri tomato ga-esi ike nkụ, ma e wezụga nke ahụ, ha jupụtara na mmiri ma n'ọnọdụ ụfọdụ, ha nwere ike ịsụ. Oge ị nweta ihe ọkụkụ nke osisi ahụ a kapịrị ọnụ malitere na Septemba ma na-adị n'ime ọnwa Ọktoba. Isi ihe ịchọta nchịkọta tupu mmalite nke ihu igwe oyi.
Ọ bụ ezie na e nwere echiche dịgasị iche banyere nke a: ụfọdụ na-enye ndụmọdụ ka ha wewe ihe ubi nke ọhịa Roses mgbe mbụ ntu oyi. N'okwu a banyere ma ọ ga-ekwe omume ịchịkọta anụ ọhịa mgbe ntu oyi gasịrị, ndị ọkà mmụta sayensị kwuru okwu ikpeazụ. Na laabu, ha gosipụtara na obere okpomọkụ nwere mmetụta na-emebi ihe na ụfọdụ macronutrients na vitamin C.
Anụ ọhịa gbara osisi ọ bụghị otu ihe ahụ na ihe mejupụtara nke vitamin. O kwere omume ịmata ọdịiche dị elu nke vitamin rose site na vitamin dị ala site na sepals. Na mbido nke mbụ, a na-eduzi ihu ha n'elu, na-agbawa agbawa, oghere dị okirikiri na-anọgide n'ebe iko. Na ụdị nke abụọ (a na-akpọkarị "nkịta bilie"), kama nke ahụ, a na-ehulata akwụkwọ na iko. N'ịbụ ndị na-ada, ha na-ahapụ ihe mgbatị ukwu nke pentagonal.
Ya mere na n'oge oyi, ị nwere ike iri ọtụtụ tomato na mkpụrụ osisi, gbalịa ịkụcha blueberries, cherị, dogwoods, gooseberries, apụl, pears, apricots.
Ọkwado na-akwadebe adịghị ewe oge buru ibu, ma na-achọ nlebara anya na nnọgidesi ike. Ọzọkwa, ọ bụghị ihe ezi uche dị na ịkwụsị ọrụ a maka oge ọzọ, ebe ọ bụ na tomato na-arịwanye elu n'oge na-adịghị anya. A ghaghị ịhazi owuwe ihe ubi site na ịhọrọ ihe kwesịrị ekwesị maka ihicha. Kedu ihe na-agba ume ka ị kpọọ nkụ, ị ga-aghọta, nwee ire ere a tụfuru agbafu, mebie ma zọda mkpụrụ. Mgbe ahụ họrọ ihe atụ a họọrọ na colander na ịsacha na mmiri iyi. A ghaghị ime nke a nke ọma ka ọdụ dị na sepals ghara ịkwụsị, ma ọ bụghị ihe ọṅụṅụ na ihe oriri ga-ada.
Na-esote, tinye tomato ndị dị ọcha na akwa kichin ma hapụ ha ka ha kpoo otu awa. Iji mee ngwa, ị nwere ike ihichapụ ha n'elu na akwa akwa. Ọ bụrụ na ịchọrọ, ma ọ bụrụ na ị nwere oge, ịnwere ike belata mkpụrụ ahụ na ọkara ma wepu mkpụrụ. Na nke a, ha na-agbanye ngwa ngwa iji kpoo ma bụrụ ihe dị mfe maka ịmepụta.
Ị ma? Dị ka akụkụ nke ọhịa rose ascorbic acid bụ 50 ugboro karịa lemons.
Na-edozi tomato nchịkọta mmanyeMa ọ bụghị ya, ha agaghị enwe ike ịchekwa ruo ogologo oge, ghọọ ndị na-akpụzi ma ghọọ ndị na-ekwesịghị ekwesị. Na ngwa ngwa ị na-ehicha ha, ka ha na-eri nri karị. Enwere otutu usoro nke ikpochapu mmiri na ngwa ngwa - site na oge ochie na teknụzụ dị elu. Anyị ga-aghọta nke ọma ihe a pụrụ ime na nkịta na n'ụzọ dị aṅaa.
Iji malite, kesaa mkpụrụ osisi ahụ a kwadebere na bọmbụ edo edo na mpempe akwụkwọ.
A na-atụ aro ka ị malite usoro nchịkọta ahụ na okpomọkụ nke + 40 ... + 45 ° C, jiri nwayọọ nwayọọ mee ka oge ahụ ruo 60 ... + 70 Celsius C. Echechila ọnụ ụzọ nke oven ahụ, ma ọ bụghị na nkịta-agaghị adacha, ma ghaa. Jiri nlezianya lelee ọnọdụ nke ihe ọkụkụ, kpalie ya ka ọ bụrụ nkụ ma kpọọ ya ọkụ.
Usoro dum ga - ewe site na awa 8 ruo 10, ya mere ahapụla kichin ruo ogologo oge.
Mgbe tomato dị njikere, egbula ọsọ iji tinye ha na akpa. Nke mbụ, ka ha dị jụụ na mpempe akwụkwọ, wee tinye ha na igbe mbadamba ma jisie ike maka 2-3 ụbọchị. A na-eme nke a ka ọbụnadị mmiri dị na mkpụrụ osisi na gburugburu ebe obibi. Mgbe enwere ike ịchọta ihe ndị a niile a ga-ewepụ na ebe nchekwa.
Ọ dị mkpa! Mkpụrụ osisi a mịrị amị na-ejikọta ọnụ ma chekwaa agba ha, ísì na uto.
N'iji otu esi ehicha nku elu na oven, a na-eme usoro a na ngwaọrụ ihicha. Maka nkọwa zuru ezu banyere oge na ọnọdụ okpomọkụ mgbe ị na-ehicha otu nwa ebu n'afọ, ndị na-emepụta ihe na-egosi na ntuziaka maka ojiji. Ya mere, ọ naghị eme ka uche kwuo banyere ntọala ahụ, ebe ọ bụ na akara ọ bụla nwere àgwà nke aka ya.
Ihe bụ isi bụ na ọnọdụ okpomọkụ adịghị ala karịa + 50 Celsius C ma ọ bụghị elu karịa + 70 Celsius C, ma ị ga-amalite na ụkpụrụ kachasị elu. Nke a ga - ekwe ka ihe ọṅụṅụ ahụ gbasie ike ma mee ka anụ ahụ sie ike. Mgbe awa 2 gasịrị, ị nwere ike ịgbanwe gaa na okpomọkụ kachasị elu.
Ọ bụrụ na ị mejupụta ihe ọkụkọ eletrik na tomato, ala ala ngwa ngwa ịkụkarịa n'elu. Kwadebe maka nke a, ma ahapụkwa ngwaọrụ ahụ na-aga n'ihu. Maka mkpụrụ zuru oke nke mkpụrụ osisi ahụ ga-ewe ihe dị ka awa 7-8. Awa ole na ole tupu ọgwụgwụ ahụ, cheta na ọnọdụ okpomọkụ ị malitere ịkwanye ahịhịa ọhịa ma setịpụ ọnọdụ kwesịrị ekwesị.
Eziokwu ahụ bụ na ọ ga-ekwe omume ịkpọ nkụ maka oyi (dil, pasili, cilantro, akụ nke garlic, sọrel, spinach, celery) ma ọ bụ mushrooms mara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla, ma ọtụtụ ndị, maịl ma ọ bụ squash bụ ihe ijuanya maka ọtụtụ.
Teknụzụ ndị ọzọ na-agụnye ihicha tomato na ala akọrọ na nke ọma.
Ruo nke a, nkịta bilie gbasaa na kaadiboodu ma ọ bụ eriri ákwà na-ahapụ ka ikpochapụ mmiri, na-ewepụ ụzarị anyanwụ. Eziokwu bụ na ultraviolet nwere mmetụta na-ebibi ihe na vitamin na mineral ndị dị na tomato. Ya mere, mbara ihu na n'okporo ámá na-eguzo ozugbo iji wepu.
Ụfọdụ ndị nwanyi na-eme nri mgbe ha na-akwadebe mkpụrụ maka tii na-ejikọ ha na zest nke osisi citrus ma ọ bụ na ginger na pawuda. Ndị bi n'ime ime obodo chere na stovu bụ nhọrọ dị mma maka ihe ndị dị otú ahụ.
Na obodo ukwu, ị nwere ike ime ya na stovu gas. Mana ụzọ ndị a chọrọ oge ka ukwuu iji rụpụta ihe ikpeazụ, kama iji oven na eletrik eletrik. Echefula na ngwa ngwa a na-eme ka ihicha ihe dị, ọtụtụ vitamin ga-anọgide n'ime tomato.
Ị ma? Dika akwukwo ochie nke Gris na ekwu, osisi ohia nke ohia nwere otutu acha uhie uhie n'ihi Aphrodite, onye gbabara aka n'onwu nke onye o huru n'anya, na-ada aka ya na obara ya ma amaghi otu ohia ohia si agba ya.
Mgbe ị maraworị banyere ụzọ aghụghọ nile nke nkwadebe ọgwụ tomato, ka anyị tụlee otú ị ga-esi chekwaa rose, na-akwadebe ya maka oyi. Ihe mbụ ị chọrọ iji wepu ya. Iji mee nke a, jiri nwayọọ meechaa tomato ahụ n'ụzọ dị otú ahụ iji chebe iguzosi ike n'ezi ihe ha.
Mgbe ahụ, mkpụrụ osisi a mịrị amị na-agbasasị arịa na lids. Ikwusi ike na ịṅụ ọgwụ na-abaghị uru, n'ihi na ọ nwere ike ịda njọ.
Ọ bụrụ na enweghị ihe nkesa kwesịrị ekwesị, ịnwere ike iji akpa akwa ma ọ bụ akpa mmanya ọ bụla. Na mbipute ikpeazụ, gauze atọ ga-adị mma maka mkpuchi ahụ.
Ebe kachasị mma maka ihichapụ ihe ọkụkụ bụ ebe dị jụụ. Ozugbo ngwụsị nke usoro ahụ gasịrị, a gaghị atụ aro mkpụrụ osisi ahụ, ebe ọ bụ na a ghaghị inye tomato dịkarịa ala 3-4 ụbọchị ka ha wee gaa.